bio-based succinic acid / amamịghe nke bio
Isi mmalite teknụzụ: Mmepụta nke acid succinic biological site na teknụzụ microbial gbaa ụka: teknụzụ sitere n'aka otu prọfesọ zhang xueli nyocha nke "ụlọ akwụkwọ nke teknụzụ microbial ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ sayensị China (tianjin)". Nkà na ụzụ a na-ebute usoro ịrụ ọrụ nke ọma na ụwa. Njirimara ngwaahịa: Akụrụngwa sitere na shuga shuga na-agbanwe agbanwe, usoro mmechi emechiri emechi, njirimara ngwaahịa a ruru ...
Njirimara: Sodium succinate bụ kristal kristal ma ọ bụ ntụ ntụ, enweghị ụcha ọcha, enweghị isi, ma nwee uto umami. Zọ uto bụ 0.03%. Ọ kwụsiri ike na ikuku ma nwee ike ịgbanye na mmiri.
Uru: Ọ na - eji shuga shuga emeghari dị ka akụrụngwa iji mepụta sodium nke ọma site na ịgba ụka. Ọ bụ ngwaahịa biomass dị ọcha; ọ bụ ọcha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ usoro na-enweghị mmetọ, na ngwaahịa mma bụ nchebe na a pụrụ ịdabere na.
Bio nke dabeere na 1, 4-butanediol (BDO)
A na - eme 1,4-butanediol nke sitere na bio site na succinic acid sitere na bio site na usoro dị ka esterification, hydrogenation, na ịdị ọcha. Ihe bio-carbon nwere ruru 80%. N'iji 1,4-butanediol sitere na bio dị ka ihe akụrụngwa, plastik PBAT, PBS, PBSA, PBST na ngwaahịa ndị ọzọ emepụtara bụ plastik na-emebi emebi ma na-agbaso ụkpụrụ ọdịnaya nke biomass zuru ụwa ọnụ.